Tolina amantii islaamaa Tolina amantii islaamaa - articles
Barnoota 1ffaa tolina amantii islaamaa
1–Beekaa Diin keenya kan islaamaa kun Amantii dhugaati. filatamtu, jaalatamtuu, guutamtuudha. kanarratti Rabbiin s.w akkana jedha.
"ar'aan tana warren kafaran amantii teeysan (miidhurraa) garaa muratanii jiran. Egaa isaan hinsodaatinaa anuma sodaadhaa, arr'aan tana amantii teessan isiniif guute, qananii tiyyas isinirratti guute, amantummaaf islaama isiniif jaaladhe,"
2-Ammas diin kun kan ilmi namaa hundi hordofuun isaanirratti dirqamaati.
3-Ammas Amantiin teenya tan islaamaa tun amantii zamana hundaaf biyyahundaaf ummata hundaaf mijjoytuu taateedha
4-Akkasuma amantii toltuu amantiin biroo qabdu hunda walitti qabattee toltuu birootis irratti ida'atteedha.
5-Akkasuma ammallee diin keenya kun amntii haqaa tan nama isa qabateef Rabbiin milkiifii injifannoo waadaa seeneefii dha.
6-Akkasuma diin kun diin haala amala gaarii hundatti ajajee hamtuu hundarraa dhoowweedha.
Hiikkaan” Allaha haqafii toltutti ajaja. Firaa gargaaruttis ni ajaja. Ammo nidhowwaa hamtuu fokkattuufii badirraa walmiidhurraayis nidhowwa, akka qajeeltaniif isin gorsa.”
7-Ammallee diin keenya kun jiruu hawaasummaa gaarii yeroo duraatiif kan itti ajajee karaa godhe isa.
Fakkenyaaf-haadhaaf abbatti tola ooluu itti nama ajaja, Fira maxxanfachuu, maatii ufiitti gaaromuu, olla gargaaruufii jabeysuu, akka seenaa addunyaati yeroo duraatiif mirga dubartootaa tiifii kan daaimmanii, kan manguddoota kan kabajee seera itti labse diin islaamaati.
obboleeyyan muslimaa hundatti tola ooluu, inumaa ilmaan namaa qofa osoo hintahin
hanga horiifii bineensa gaaraa gayu miidhuu dhabuufii tola itti oolutti nama ajaja. Mirga isaanii nikabaja. Hawaasa amantii biro qabu wajjiin akkataa itti haala gaariin wajji jiraatan seera gayaa labsee jira. Kanarratii yerootu nutty gabaabbate malee keewwata qur'aanaafii hadiisaa hedduu akka ragaatti tarreessuu nidandeenya.
Akka adawwiin olola kijibaa hafarsaa jirtu jettuu miti. Muslimni mankaraarsaa miti muslimni shoorarkessaa miti. Kun duula kijibaa kan dhugarraa fagatee, duula humnoota farroota islaamaa kan amantii muslimaa maqaa gurraacheysuuf deemaa jiru tahuun isaa ifatti beekamuu qaba.Ammas irra deebinee islamni amantii nagayaafii jaalalaa, tan kabajaa fi rahmataati. Muslimnis ummata nagayaati, ummata jaalalaati, ummataa barnootaati, ummata guddinaafii misoomaati. Egaa warren farra islaamaatiin akki jennu, manzaraa (manaaxirii) guraacha dukkanaawaa ijarraa waan qabdaniif wanni gartan hundi isinitti dukkanooytee ufirraa baasaa ija fayyaa qabduun laalaa, yoggus dhugaa gartanii jennaan.
Tanaaf Amantiin teenya amantii umaan wliigaltu tan namni hundi irrtti dhalatu (diinul fixrah) jedhama.
AlhamduliLlaahi Rabbiin isii nubadhaase.Tanaaf Diin kana baradhaa, jabeyfadhaa, walbarsiisaa, irratti jiraadhaa isiniin jenna.
TOWHIIDA UTUBAALEE ISLAAMAA FI IIMAANAA
Ergaa tokko qofa
qaama saalaatiifii arraba uf tiiysuu
nama joolleen xixiqqoon duraa duute